မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 5
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းတဦး ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၄ သမ္မတကြီးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးခင်းဗျား …. ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနရှိ အကျင့်ပျက်ခြစားဝန်ထမ်းပျက်ကြီးတွေထဲမှ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် မပြုတ်သေးတဲ့လူတစ် ယောက်ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီလူက ယခုလက်ရှိ Mobile CE ...
မုိုးမခပေးစာ ဇန်န၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၄ Photo : CNN ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဘိုကလေးမြို့၊အမှတ်(ခ)ရပ်ကွက်နေ၊ ယုဇနလမ်း၊ အမှတ် (၁၂၈/ခ) နေ (ဘ) ဦးလှသိန်း၊ (မိ) ဒေါ်စန်းရီတို့၏သား မွေး သက္ကရာဇ်...
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကို ကြိုဆိုသော ပုသိမ်မြို့နယ်မှ လယ်သမားများကို ရဲကဖမ်းဆီး ဟင်္သာတမီဒီယာ ပေးစာ။ ပုသိမ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၃ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ စကားဝါလမ်းထိပ်တွင် ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်...
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသော သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး နှင့် MECTel (ဖုံး)နတ်သား၊ ဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၃ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ယနေ့အချိန်အခါတွင် ဘယ်အချိန်က အော်ပရေတာ လျှောက်ထားပြီး...
မထသ ကပြည်သူတွေကို လိမ်နေပြီ မထသခရီးသည်တဦး၊ မိုးမခပေးစာ၊ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ ဂျာနယ်တော်တော်များများမှာ သင်္ကြန် ကိုယ်မြို့ကိုယ်နယ် အပြန်တွေကို ခရီးသွားပြည်သူများ အတွက် ကားလက်မှတ်ခကို သတ်မှတ်ထားသော အဖိုးထက် ပိုကောက်ရင် ပြင်းထန်စွာ...
မုိုးမခပေးစာ ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
လှည်းတန်းအိမ်ယာ မိလ္လာကန်ကျုးကျော်မှု သမ္မတအထိ တိုင်ကြား မိုးမခပေးစာ၊ ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၃ နှစ်ရှည်လများကြာပြီဖြစ်သည့် မိလ္လာကန်နှင့် စုပေါင်းအိမ်ယာ ကားရပ်နားကွင်းကို အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္မဏီတို့က တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်များ၏ ကန့်ကွက်ချက်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး အဓမ္မကျုးကျော်မှုကို အများစုပေါင်း...
ကလေးချစ်သူ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၃ နိုင်ငံတကာမှာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ်ကိုစေခိုင်းရင် ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူကြပါတယ်။ ပွင့်လင်းလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုပါဘဲ ကလေးသူငယ်ကို စေခိုင်းတာဟာ ဥပဒေအရ ကာကွယ်ရပါ့မယ်။ဒီမိုကရေစီမို့ လုပ်ချင်တာ လုပ်တယ်...
လိမ်လည် လှည့်ဖြား လှည့်ကွက်များမှ ကင်းဝေးကြပါစေ မင်းမျိုးဝင်း(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)၊ မတ် ၂၀၊ ၂၀၁၃ လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာ ထွက်လာပါပြီ။ အမြင်မတူသူတွေကြားမှာလည်း ကွဲပြားမှုတွေနဲ့ ပွက်လောရိုက်နေကြပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအစီရင်ခံစာထွက်လာရင် အားလုံးအကြိုက်ဖြစ်မယ်လို့တော့ ကျွန်တော်...
ပေးပို့သူ – မေသော်တာ (ဟင်္သာတသူ) မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၁၃ ဟင်္သာတ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းဇော်၏ လက်အောက်ဝန်းထမ်းများအားလုံးကို မတရားဖိနှိပ် ခိုင်းစေမှုကို အထက်လူကြီးများ သိစေရန်နှင့် မှန်မှန်ကန်ကန်...
မြ၀တီက ချစ်ကြည်ရေးတံတား ယာဉ်ပိတ်ဆို့မှု ဖြေရှင်းပေးစေလို မောင်လှမျိုး (တံတားထိပ်)၊ မတ် ၁၅၊ ၂၀၁၃ ကျွန်တော်တို့ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်က နာမည်ကြီး မြ၀တီမြို့တော်ဟာဖြင့် နေ့စဉ် ဆိုသလို ချစ်ကြည်ရေးတံတား ပတ်လမ်းပေါ် စည်းကမ်းမဲ့...
မြန်မာ့ရိုးရာတူရိယာ လင်းကွင်း ဘောလုံးကွင်းမှာ တရားမ၀င် ပန်းသီး၊ မတ် ၈၊ ၂၀၁၃ ကျနော့်သူငယ်ချင်းများနဲ့ မြန်မာနှင့်အိန္ဒိယာဘောလုံးပွဲ အားပေးမည်ဟု အားခဲပီး သုဝဏ္ဏဘောလုံးကွင်းဆီသို့ဆိုင်းတွေဗုံတွေနဲ့ တပျော်တပါးကြီးသွားကြပါတယ်။ ကွင်းထဲလဲ ၀င်တော...
ပေးပုို့ – ဟင်္သာတမီဒီယာ မတ်လ ၇၊ ၂၀၁၃ မကြာမီကာလအတွင်းက ဟင်္သာတမြို့မှ ရဲသတင်းပေး အယောင်ဆောင် ခင်မောင်မြင့်ဆိုသူ၏ လိုင်စင်မဲ့ကား အဖမ်းခံရသည့်နောက် တရားရေး၊ ဥပဒေ၊ အကျဉ်းထောင် စသည်တို့နှင့် ရူတ်ယှတ်ခတ်နေသော ဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါသည်။...
ပေးပုို့ – ဟင်္သာတမီဒီယာအဖွဲ့ မတ်လ ၅၊ ၂၀၁၃ အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရားမှ ရွှေဆိုင်းကန်ထရိုက်တပည့်နှင့် ဈေးသည်များ စကားများရာမှ ဈေးသည်အမျိုးသမီး (၇) ဦးအား ပုဒ်မ(၄၄၀)ဖြင့် ဖမ်ဆီးထားကြောင်း သိရှိရသည်။ ၂၆.၂.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် တာလေးတိုက်နယ်၊...
ဟင်္သတသားများ၊ မတ် ၄၊ ၂၀၁၃ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ အင်္ဂပူ-ညောင်ကျိုး ပြည်သူများစုပေါင်း ထည့်ဝင်ငွေများနှင့် တည်ဆောက်ခဲ့သော ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး လျပ်စစ်ပင်မဓါတ်အားလိုင်းကို အဆိုပါကျေးရွာ၏ လျပ်စစ်မီးလင်းရေးကော်မီတီဥက္ကဌ ဒေါက်တာဌေးဝင်း (အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်)က အခြားကျေးရွာတခုဖြစ်သည့် သပြေကုန်းကျေးရွာကို လျပ်စစ်မီးသွယ်တန်းရန်...